Abbaan Alangaa namoota yakkaan shakkaman hidhuufi himachuuttin jira jedhe - BBC News Afaan Oromoo
Abbaan Alangaa namoota yakkaan shakkaman hidhuufi himachuuttin jira jedhe
Image copyright Attoreny General
Yakkoota yeroo dhihoo as kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatamaa jiraniin namoonni shakkaman to'annoo jala oolchuun himannaa irratti banuu eegaluusaa Abbaan Alangaa walii galaa beeksiseera.
Waajjirri Abbaa Alangaa Waliigalaa ibsa Kamisa waaree baaseen wal-dhabdee saboota fi naannoolee akkasumas namoota dhuunfaa fi gareelee jidduutti uumaman ka'uumsa godhachuun iddoowwan yakki itti raawwatametti shakkamtoonni to'annaa seeraa jala oolfamanii haala qindaa'een himannaan irratti banamuun eegalameera jedhe.
Iddoowwaan waldhabdeen itti uumameera jechuun shakkamtoonni to'annaa jala oolfaamaa jiran keessaa Gujii Lixaa, magaalaa Adaamaa, Shawaa Bahaa, Arsii, Harargee Bahaa, Arsii Lixaa, Shawaa lixaa fi naannawwa Finfinneetti godina addaa Oromiyaa kan eeraman yoo ta'u naannoo Kibbaatti immoo godina Geedi'oo, Hawaasaa, Teeppii fi godinni Shakkaa eeramaniiru.
Naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hidhaan hammaachuufi kunis filannoo dhufuuf yaaddessaa ta'uu dhaabbileen siyaasaa fi mirga namoomaa yaaddoo qaban ibsaa turaniiru.
'Jigjigaatti guyyoota lama keessa qofa namootni 58 ajjeefamaniiru'
''Namoonni ibsa [miidiyaaf] kenninuus hidhamuu dandeenya''
Iddoowwan biroo namoota shakkaman to'annaa seera jala oolchuun akka jalqabame eeraman keessaa naannoo Somaaleetti Jigjigaa fi godinoota biroo, naannoo Benishaangul keessatti godina Kamaashi, godina Matakkal, naannoo Amaaraatti godina Shawaa kaabaa fi bulchiinsa saba Oromaa, bulchinsa saba Awwiitti godina Jaawwii, Gondar, dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbilee barnoota ol'aanoo muraasa keessatti yakkoonni raawwataman akka ka'uumsatti fudhachuun hojiileen shakkamtoota to'annoo jala oolchuun jalqabamuusaa himeera.
Dabalataanis gamaaggama aanga'oota mootummaa ol'aanoorratti taasiseen yakkoonni iddoo garagaratti raawwatamanitti harka keessaa qabaachuusaanii himeera.
Aanga'oonni yakkaoonni akka raawwataman godhanii fi yeroo raawwataman cal'isan akka of qusatanis akeekkachiiseera.
"Biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf bu'aa bayii ture yeroo dhumaatiif akka irra aannu ifadha" kan jedhe ibsichi shakkamtoonni seera duratti akka dhiyaataniif yaalii taasifamu qaamolee danqan irratti obsa tokko malee tarkaanfii akka fudhatamu ibseera.
Hojiileen seera kabachiisuu waan mariif dhiyaatuu akka hin taanee kan hime ibsichi nageenyaa biyyaa fi ummataaf jecha kana booda namoonni yakka keessatti hirmaatan irratti obsa tokkollee akka hin qabne beeksiseera.
Gaafa Roobii magaalaa Jimmatti KFO'n marii hawaasaa taasisuuf yaadamee turetti qondaaltonni paartichaa damee Jimmaa miseensonnisaanii hidhaamaa jiraachuusaanii BBC'tti himunsaanii ni yaadatama.
Kutaalee Oromiyaa adda adda keessatti dargaggoonni hidhamaa jiraachuu baay'inaan marsaalee hawaasaa irratti dubbatamaa ture.
Abbaa Alangaa Waliigalaa: Haasaawwan jibbiinsaa ittisuuf labsiin qophaa'aa jira
23 Sadaasa 2018
''Namoonni ibsa [miidiyaaf] kenniinuus hidhamuu dandeenya'' Abbaa Alangaa Itti - aanaa Naannoo Amaaraa
Biqila ilaallachuu, aadaa milkiin gaa'elaa ittiin ilaalamu
'TPLF' qabsoo hidhannoo hanga 'Tigiraay biyya of-dandeesse...'
Awwadaayitti deeggartootni fi mormitoonni mootummaa wal lolan
Guyyaa Afaan dhaloota addunyaa
Atileet Birhaanee Abaabil riikordii addunyaa cabsite
Abbootiin Gadaa rakkoon nageenyaa akka furamu Pirezidantii Oromiyaa xalayaan gaafatan
Odeeffannoon Ejansii Ittisaa Ameerikaa hatame
Namtichi masjida Landan keessatti nama waraane to'atame
Barruun 'Gullallee post' akka hin gurguramne dhorkamee?